Apple - inkampani edume kakhulu futhi iyahlonishwa, okuyinto emhlabeni wonke ezaziwa. Uveza ezihlukahlukene isofthiwe, Kutfutfukisa silwenza amakhompyutha imikhiqizo kakhulu iPhone ne-iPad. Cishe izwe lonke wasibekela yilezi zikhali ngamunye abasebenzisi ngesikhathi inkampani izama ukuthenga umkhiqizo imikhiqizo emisha. Ngakolunye uhlangothi, zikhiqiza amadivayisi eliphezulu, kanjalo sijabulise abasebenzisi babo. Kodwa ngakolunye uhlangothi, izinkinga ubuso eziningi zibangelwa ukunganaki banal noma washesha.
Ajwayelekile nezimo ezinjalo? Yiqiniso, abasebenzisi abaningi ngeke ukuqagela ngesikhathi esisodwa ukuthi ingxenye isicelo, esifundeka kanje: "Indlela ukuvula aypad ngokusebenzisa iTunes?". Lapha, empeleni, lapha yonke into icacile! Le nkinga kwenzeka ngoba cishe wonke umsebenzisi wale mikhiqizo 6. Kanjani ukuyixazulula futhi siyini ukuba yinkimbinkimbi kwako kweqiniso? Impela lezi zinkinga futhi kuyoba focus yalesi sihloko ukubeka zonke emashalofini isimo, ngaphezu, ukuvumela siqu sakhe ukubhekana nalesi simo esingajabulisi.
Iphutha "Valiwe: iPhone, ukuxhuma iTunes», kanjani ukuze bavule le divayisi usesimweni esinjalo? Ngaphambi siqala cabanga ngemininingwane inkinga, kubalulekile kusengaphambili ukuhlangana izizathu lapho ivela khona, okuyizinto nkomoni ezingaphezu kuka kungase kubonakale efika kuqala. Okubaluleke kakhulu, ningatatazeli futhi ukuthola indlela ngandlela-thile nokunciphisa isimo. Khiya - lokhu akukona ukwehluleka zedivayisi, kodwa inkinga encane, okuyinto ilula ngempela ukuxazulula.
Ngakho, lokho elikumelelayo? Le nkinga kuvimbela umsebenzisi usebenzisa idivayisi ngokuqondene iphasiwedi yayo Ilokhi noma njalo ayilungile. Lokhu kusho ukuthi kudivayisi yakho enqaba ukwenza noma yimuphi umsebenzi ngalo, kodwa namanje kungenzeka ukuba basebenzisane iTunes Umbuso indawo ekhethekile ngokusebenzisa ikhompyutha yakho. Noma yimuphi omunye kokungenela kungadala ukuphazamiseka noma wajaha umthwalo wokuphatha ngaphansi kwemigomo yesivumelwano ukusetshenziswa. Kanjani ukuze uvule idivayisi yakho iTunes? Ngenxa yalesi kubalulekile ukuqhuba uchungechunge eziyinkimbinkimbi, kodwa zokukhwabanisa ngempela kucace, yilokhu sizobe ukukhuluma okwengeziwe.
Imbangela ematheni iphutha ubuvila ayo futhi ishesha. Phela, umsebenzisi ubhekwa imithombo nesenzakalo yenkinga ukuthi kuphakama ngenxa yokuthi iphasiwedi engalungile wangena, noma umsebenzisi ukhohlwe ukukwenza. Yebo, kubalulekile ukuba acabangele ukuhlukahluka lapho izingane ngengozi uthole idivayisi yakho bese ufaka iphasiwedi engalungile. Akekho ogonyiwe kusukela ngalesi sehlo, ngakho ungakhathazeki kusengaphambili, njengoba inkinga ingaxazululwa, Nokho, musa njalo uphathe ukukwenza ngaphandle nomthelela ongemuhle. Njengoba ezinye izindlela kuzodinga ukususwa noma ukufometha idatha yakho, okuyinto isimo kunalokho edabukisayo.
Yeka indlela okuyingozi kuyinto na?
Iphutha "Valiwe: iPhone, ukuxhuma iTunes», kanjani ukuze uyivule? Yeka indlela okuyingozi kuyinto na? Futhi kungakhathaliseki ukuthi kubalulekile ukuba wesabe ukubukeka kwayo? Eqinisweni, asikho isidingo wesabe ke, uma wazi kanjani ukuyixazulula ngendlela ephephile. Kwezinye izimo, ungase ulahlekelwe yonke idatha ukuthi agcinwe kudivayisi, kufaka phakathi oxhumana nabo, izithombe, konke. Kumele kukhunjulwe ukuthi kwezinye izimo, uma uzama ukundlula ukuvikelwa noma zama Hack ke, idivayisi ingavinjwa futhi ulibuyise kuyoba kuphela isikhungo service, lapho izindleko le sevisi kungeyona encane. Ngakho-ke, kuyafaneleka ukucabangela, futhi ukuthi kuwufanele ukuzama ukuqonda izici of isakhiwo ukuthuthukiswa lombhali, inqobo nje uma ingozi siphezulu kakhulu?
Indlela ukuvula iPhone ngokusebenzisa iTunes? Lokhu kungenziwa ngezindlela eziningi, kodwa ekuqaleni kuwufanele uzama ukubhekana nale nkinga ngendlela esingokwemvelo, okusho ukuthi ukhumbule iphasiwedi. Ngokuvamile-ke unikezwa imizamo eminingana, okungase okuphindaphindiwe emva kwesikhashana, kodwa kukhona futhi izinguqulo firmware, okuyinto ngokushesha ukuvimba ukufinyelela noma ukuvumela umsebenzisi ukuze ukhethe iphasiwedi. Kulokhu, kufanele usebenzise i-iTunes, okuyinto uvezwa ndawonye nedivaysi. It is efakwe kwi computer futhi isisekelo cishe yonke indlela yokuxazulula le nkinga. Kuyinto ngosizo ke udinga sizame ngomusa ukubuyisela idivayisi yakho, kunokuba ngezinye izindlela abaculi "komhlaba". Ngokusebenzisa uhlelo, ungakwazi ukuxazulula noma yiziphi izinkinga, kodwa akulona njalo ukwazi ukwenza ngaphandle ukulahlekelwa. Okwamanje, zikhona izindlela eziningana ukuze sibone ukuthi ukuvula iPhone 4, iTunes, ezisukela iphasiwedi ukuqagela, ophela isici olungajwayelekile kuziwa kabusha kumasethingi factory. Bonke sicabanga obengeziwe bokuthi empeleni, kuzokuvumela ukuba baqonde indlela yokuxazulula le nkinga. Udinga ukukhetha ngendlela efaneleke kakhulu futhi ubuyisele kudivayisi yakho.
Kungenzeka ukusetha kabusha imizamo
Yini okudingayo ukuthi uvule i-iPhone ngokusebenzisa iTunes? Okokuqala, ake ukusizakala ke iyindlela standard, okuyinto ukuqashelwa evamile kudivayisi yakho. Udinga ukuxhuma umklamo computer Apple, bese usebenzisa i-iTunes kufanele aqaphele kudivayisi, bese kuphela ngeke kabusha isici iphasiwedi elikuvumela ukuba usebenzise inombolo engenamkhawulo imizamo. Kukhona omunye imininingwane elincane le ndlela, okuyinto ukuthi uma lisetshenziswe ngaphambilini kukhompyutha yakho kulesi sici, futhi manje isisezweni ungenalo ke nibe nilindele lezi zindaba ezibuhlungu, njengoba idivayisi ingaze PC eyodwa kuphela. Ngakho, ungalilahli ukunganakwa leli thuba futhi ukuze ngokuvamile zisebenzisa le ndlela ukubala kusengaphambili izenzo kanye kungenzeka isimo ezimbi.
Setha kabusha imizamo
Indlela ukuvula iPad iTunes? Isimanga siwukuthi kodwa iPhone and iPad babe uhlelo yezokuphepha kakhulu ezifanayo, ngakho zonke izincomo ngenhla nezindlela yokuxazulula le nkinga ngeke kokubili kumadivayisi ukuza. Manje uqhubekela indlela olandelayo, okuyinto bug encane kuma-iTunes. Ngakho, kuzomele uphinde uxhume idivayisi kwikhompyutha yakho futhi esikhundleni siqaphela unike amandla ukuvumelanisa izakhi axhunyiwe. Uma le nqubo iqale kabusha, kudingeka uchofoze esiphambanweni, futhi ukukhansela inqubo. Wayeka, kodwa isibalo yokusetha kabusha izama ukusebenzisa ukuthi kuzokuvumela qhubeka khumbula noma ukuze ukhethe iphasiwedi.
ukusetha kabusha iphasiwedi Amandla
Ngaphandle izindlela ezihlongozwayo musa asize, bese kwesokunxele ukuya izinyathelo lubucayi kakhudlwana komunye ukuxazulula le nkinga. Uma iphutha kwenzeka, "Valiwe: iPhone, ukuxhuma iTunes», kanjani ukuze uyivule, inqobo nje uma kungekho indlela eyodwa akusebenzi? Kulula pretty, nje kabusha iphasiwedi, kungakhathaliseki ukuthi iba yini imiphumela. Ukuze uhlele le nqubo, kufanele uvule edivayisini bese ixhume ikhompyutha, khetha Mode yokutakula. Ngemva ukushintsha devaysa thwebula siqala futhi ushukumisa ukuba ubuyekeze idivayisi, kufanele nivumelane nale nkinga. Ngemva izenzo ezenziwe futhi ubuyekeze iTunes izonikela scan idivayisi yakho. Ekupheleni isivivinyo azobika ukuthi amadili nokubuyiselwa ohlelweni, kufanele ugijime. Ngakho, uzokwazi ukubuyisela uhlelo lwayo mobile futhi iphasiwedi, Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi nale ndlela ngeke ulahlekelwe yonke idatha egcinwe efonini yakho.
Buyela kumasethingi factory
Iphutha "Valiwe: iPhone, ukuxhuma iTunes», kanjani ukuvula idivayisi? Ngenhlanhla, abaningi ekuthuthukiseni Apple babe ukubunjwa yabo ezinye izici ezengeziwe, enye yazo ukubuyisela uhlelo ngokuyeka isikole ukuze izilungiselelo endaweni yokukhanda. Yini indlela lokhu kwaziwa kahle kodwa ukuchitha ke, kudingeka ufunde imiyalelo efike ngokuthenga kwakho. Uma imibhalo iyatholakala, bese ulandela izinyathelo ezilula, uyoba kuzuzwe umphumela omuhle. Uma kwenzeka, uma kungekho umsebenzi nezindlela abalwe ngenhla awahlanganisi ukusiza, ngakho-ke kufanele uxhumane isevisi ezikhethekile ukuqinisekisa ukuthi bakwazi ukulungisa kudivayisi yakho. Futhi inothi kuwufanele ukuthi eminye imikhiqizo Apple babe restarter ekhethekile ngaphakathi icala, ezingalotshwanga bhalisiwe kuphi. Ngakho-ke, ungakwazi ukuqaqa ifoni yakho noma ithebhulethi, ngokucophelela cabangela ukuthi ingabe bakhona restarter. Uma it has, ngokuqinisekile kudingeka usebenzise, endabeni yalokho omubi kufanele usebenzise izincomo zethu, ukuthi, thatha usizo ochwepheshe.
Indlela yokugwema le nkinga?
Indlela ukuvula aypad ngokusebenzisa iTunes? Enough hhayi ukudala ngokwakho izinkinga ezifana ukuthi zingaphazamisa induduzo yakho. Qiniseka ukubhala iphasiwedi yakho ephepheni wakufaka isitoreji endaweni zazo uzokwazi ukuba sikhumbule angesabi. Uma izingane ezibuza ngayo kuthebulethi yakho noma ifoni, uyivule futhi ngokwanele ukuba abanike. Futhi lapho idivayisi empeleni ukubeka ngokwanele ngakho ezindaweni ezingafinyeleleki, ukugwema isimo esibi nge ekuvimbeni. Ukuhambisana nale mithetho elula kuzokusiza ukuqeda izinkinga eziningi futhi kokuhlupheka ezingadingekile. Ngakho-ke ngaphambi kwesikhathi kuyadingeka ucabange ngazo futhi ucabangele zonke izenzo zakho ngaphambi kokuthenga into ebizayo abese ezingezwakali e ukusetshenziswa kwamadivaysi.
Isidingo isipele idatha
"Enginakho iTunes, indlela ukuvula iPhone?" - noma imibuzo akuzona ezingavamile. Ukuze ngekhono futhi ngokuphepha zisebenzisa le software idivayisi, kuyafaneleka ukukhumbula isipele okuqhubekayo idatha yabo. Ukuze isitoreji efanelekayo isitoreji ezivamile ifu, okuyilokho, eqinisweni, inikeza ngokwayo Apple. Nje ukubhalisa ngomzuzu futhi ukufakwa ukuvumelanisa unomphela kuzokuvumela esikhathini esizayo ngaphandle kwezinkinga futhi ubuyisele idivayisi ngaphandle kokulahlekelwa idatha. Cloud isitoreji inesikhala ezilinganiselwe idatha yakho, kodwa esiyiminyaka yempilo nanini. Idatha egcinwe ku-server Apple futhi kungenziwa kuhoxiswe kwenzeka ngenxa yezinkinga zezombangazwe. Amafayela akho, izithombe, umculo, njll iyimfihlo, futhi akekho omunye ngaphandle kwakho likwazi ukufinyelela kubo. Futhi akudingekile baziqambela izinganekwane ehlukahlukene mayelana lokuthi wonke amafayela audit ecacile futhi olubanzi, ukukwenza akuzuzisi futhi kunzima kakhulu. Ngakho-ke, ungakwazi ukwaba ngokuphepha ekhoneni yona esitolo enkulu isikhala Apple ebonakalayo.
Indlela ukuvula iPad ngaphandle iTunes? Futhi kuthiwani-iPhone? Njengoba okuningi njengoba Kuyadabukisa, kodwa ngaphandle lolu hlelo ukuhlangabezana nezinselele kuyoba nzima ngisho inkonzo. Ngakho azinalo ukubuza imibuzo enjalo, futhi balisebenzise yini iyatholakala futhi esibekiwe esivumelwaneni umsebenzisi. Ngakolunye uhlangothi, kungakhathaliseki ukuthi kubalulekile ukusebenzisa umshini eqolo futhi has ezinye izinkinga ukusebenza? Aint it ngokwanele ukusebenzisa ejwayelekile yokuthuthukiswa efanayo, okuyinto abe lama- nezinkinga zokufinyelela esiphezulu? Nakuba kule ndaba, iqiniso liwukuthi ulwazi siye enikeziwe kuwe, kuyokusiza zisebenzisa into yakho ezibizayo futhi kungadingeki ukuba aphinde ukhathazeke ukuvaleka kwalo okuzumayo.
Kanjani ukulungisa "Bandikam" ngoba ukhululekile ukurekhoda ividiyo
Fireplaces elingaphakathi: kusukela Empire ukuba yesimanje
Kanjani abantu abavamile izinkanyezi? izimfihlo self-Ngcono